Prof. Cali Khaliif Galaydh Oo Xalay Socdaal Tamashleyn Ah Ku Dhex-maray Suuqyada Magaalada Hargeysa+Sawiro
Tuesday June, 19 2018 - 15:35:36
Saturday June 10, 2017 - 13:42:12 in by Ayaanle Hassan
Hageysa(AFKA);Hoggaamiyaha Kooxda Khaatumo Prof. Cali Khaliif Galaydh oo maalmihii u danbeeyeyba ku sugnaa magaalada Hargeysa ayaa xalay hal mar uun la arkay isaga oo socdaal lug ah oo tamashlayn ah ku dhex maraya suuqwaynaha Caasimada Hargeysa. 1
Waxaana socdaalkan lugta ah ee xalay uu Hoggaamiye Cali Khaliif Galaydh suuqwaynaha caasimada Hargeysa kusoo maray ku wahelinayey gudoomiyaha xisbiga UCID Faysal Cali Waraabe iyo wasiiru dawlaha wasaaradda Waxbarashada Somaliland oo labadooduba kamid ah guddiga dhanka dawlada Somaliland u matalaya wada hadalada Somaliland iyo Kooxda Khaatumo.
Bulshadii caasimada Hargeysa ee ka dhex adeeganayey suuqwaynah ayaa markii ay arkeen Cali Khaliif kusoo ururay iyaga sawiro la galay isla markaana dhalinyarada qaar ay hoggaamiye Cali Khaliif Galaydh xalay kula kaftameen inuu Hargeysa soo dago isla markaana kamid noqdo Siyaasiyiinta Somaliland kana shaqeeyo horumarka iyo wax wada lahaanshaha Somaliland,waxaana horjooge Cali Khaliif Galaydh iyo dhalinyaradii caasimada Hargeysa ay xalay is dhaafsadeen hadalo kaftan iyo duur xul iskugu jira.
Cali Khaliif Galaydh ayaa kormeeray dhawr meelood oo waxyaalo kala duwan lagu iibiyo isla markaana ku dhex yaala caasimada Somaliland ee Hargeysa,waxaana dadkii goobahasi ku sugnaa ay soo dhawayn ku qaabileen Cali Khaliif Galaydh,Faysal Cali Waraabe iyo wasiiru dawlaha Waxbarashada Maxamed Xaaji Aadan Cilmi.
Socdaalkan lugta ah ee uu xalay Cali Khaliif Galaydh ku maray suuqwaynaha Caasimada Hargeysa ayaa waxa uu muujinayaa heerka ay marayso nabadgaliyada iyo xasiloonida Jamhuuriyada Somaliland.
Hargaisa:-Wasiirki Hore Ee Boosaha Oo Ka Hadlay Socdaalka Raysal Wasaaraha Itobia Ku Tagay Muqdisho Iyo Colaada Celef Wayn
18/06/2018 - 10:54:11
DAAWO WASIRO GAADHEY DEGAMADA AY DUUFAANADA XALAY KU DHUFTEEN EE SALAXLEY
17/06/2018 - 22:45:01
Muqdisho:-Qaabkii Raysal Wasaaraha Itoobiya Maanta Loogu Soo Dhaweeyey Magaalada Moqdisho.
16/06/2018 - 14:33:43
Caynaba:- sidee looga ciiday magaalada Caynaba ee xarunta Gobolka saraar
15/06/2018 - 17:28:38
Berbera: Daawo Magaalada Berbera oo si wen looga Tukaday Salaaddii Ciidka iyo Masuliyiin Hore oo Ka hadlay
15/06/2018 - 17:05:03
Laascaanood:Daawo Magaalada Laascaanood oo si weyn looga ciiday Saaka Xilli Rabshado ka dhaceen Shalay
15/06/2018 - 16:55:51
Hargeysa: Daawo Eng Faysal Cali Waraabe oo saaka Afka Furtay iyo Waxyaabaha ugu Muhiimsanaa ee uu ka hadlay
15/06/2018 - 16:39:16